အလွန်လေးစားရသော ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ရှီကျင့်ဖျင်ကို ဒေါ်နယ်ထရန့် ချီးကျူး - Yangon Media Group
အလွန်လေးစားရသော ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ရှီကျင့်ဖျင်ကို ဒေါ်နယ်ထရန့် ချီးကျူး
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁ဝ
သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်သည် တရုတ်ပြည်သူများ၏ အလွန်လေးစားရသော၊ သြဇာကြီးသော ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က နိုဝင်ဘာ ၁ဝ ရက်တွင် ချီးကျူးပြောကြားသည်။ ထရန့်သည် နှစ်ရက်ကြာ တရုတ်ပြည်ခရီးစဉ်အတွင်း ရှီကျင့်ဖျင်ကို အမျိုးမျိုး ချီးကျူးမြှောက်ပင့်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်ရေး လိုငွေပြမှုလျှော့ချရန်နှင့် မြောက် ကိုရီးယား နျူကလီးယားအရေးတွင် ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်လာစေရန်တို့အတွက် ထိုသို့ ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ကျွန်တော်နဲ့ သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားကိစ္စ နှစ်ခုစလုံးမှာ အင်မတန် အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်”ဟု ထရန့်က တရုတ်ပြည်မှ ဗီယက်နမ်သို့မထွက်ခွာမီတွင် တွစ်တာ၌ရေးသားသည်။ ”သူဟာ သူ့ပြည်သူတွေရဲ့ အလွန်လေးစားရပြီး သြဇာကြီးတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပါတယ်။ သူ၊ သူ့ဇနီးပန်လိယွမ်တို့နဲ့ တွေ့ဆုံရတာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်” ဟု ထရန့်က ပြောကြားသည်။
ထရန့်သည် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စဉ်ကာလတွင် တရုတ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့သည်။ သို့သော် သမ္မတဖြစ်လာသောအခါ တရုတ်ကို ပိုမိုချိုချိုသာသာ ဆက်ဆံလာခဲ့သည်။ တရုတ်နှင့် ကုန်သွယ်ရေးတွင် နှစ်စဉ်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၃၅ဝ ခန့် နှစ်စဉ်လိုငွေပြနေခြင်းအတွက်လည်း တရုတ်ကို အပြစ်မတင်ကြောင်း ယခုခရီးစဉ်အတွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထရန့်သည် အာရှငါးနိုင်ငံခရီးစဉ်အဖြစ် ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့် တရုတ်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသုံးနိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံရာတွင် မြောက်ကိုရီးယားအရေးကို အဓိကထား ဆွေးနွေးသည်။ ထရန့်သည် အေပက်ညီလာခံနှင့် အာဆီယံအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ရန် ဗီယက်နမ်နှင့် ဖိလစ်ပိုင် တို့သို့ ဆက်လက်သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ဝိုင်ဘီအက်စ် ယာဉ်တစ်စီး ဘရိတ်ပေါက်ရာမှ ကား ၁ဝ စီး ဆင့်တိုက်မှု အလုံလမ်း မီးပွိုင့်တွင်ဖြစ်ပ?
ရုရှားအထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ ပြိုကျ၊ ခြောက်ဦးသေဆုံး
မာဆေးနှင့် ပွဲသည် ရီးရဲလ်နှင့် ဒု-အကျော့ပွဲ အတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်မှုဟု ပီအက်စ်ဂျီနည်ြး??